Kupindirana | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Kana iwe uine kupokana nemumwe munhu, iwe unoda kuti gakava rigadziriswe nekukurumidza sezvinobvira. Kazhinji kukakavara kunoita kuti manzwiro amhanye pamusoro, nemhedzisiro yekuti mapato ese haachaoni mhinduro zvakare. Kurera pakati kunogona kuchinja izvozvo. Mediation ndiko kugadziriswa kwekubatana kwekupokana nerubatsiro rweanopokana kusapindirana: murevereri. Pane zvimwe zvakakosha zvekutungamira kwekureverera: kuzvipira uye kuvanzika. Mapato ese ari maviri anogara akatenderedza tafura achizvidira uye ane mafungiro ekushandisa. Uye zvakare, mapato ese maviri anozvipira kuchengetedza chakavanzika. Izvi zvinoshandawo kumurevereri. Murevereri anotungamira kutaura kwese, anotarisisa maitiro uye anobatsira iwe kutsvaga mhinduro yakakodzera.
Pamwe chete Law & More iwe unosvika kune yakakosha yekupokana
> 1. Kuyananisa chii?
> 2. Nei kureverera?
> 3. Kana kureverera?
> 4. Nei Law & More?
1. Kuyananisa chii?
2. Nei kureverera?
Mediation ine zvakawanda zvakanaka. Pane zvimwe zvinogadziriswa zvigadzikiso panguva yekurevera kupfuura panguva yepamutemo maitiro. Kazhinji mhinduro yakabatana inogona kusvikwa inogutsa mapato ese akabatanidzwa.
The Law & More masvikiro haatore chinzvimbo uye havatore chero sarudzo. Iwe uchazviita iwe pachako. Iwe uchashanda mukutora chikamu uye pakupedzisira ndiwe unozoona mugumo. Vayereri vedu vanokutungamira uye vanokutsigira mukuita saizvozvo. Mukana wakakosha wayo ndewekuti mapato ese maviri anogara ari mumasimba emhinduro uye hukama hwako hahuzokuvadzwe zvisina basa. Izvi zvakakosha chaizvo kuti imi vaviri muve nevana pamwe nekuti muchafanirwa kutaurirana nekutaurirana mushure mekurambana.
3. Kana kureverera?
Mediation inobatsira kune ingangoita nyonganiso nemakakatanwa, kune vega pamwe chete nekambani.
Iwe unogona semuenzaniso funga nezve:
• Kuronga kwemaitiro
• Nyaya dzemhuri
• Matambudziko ekubatira
• Kunetsana kwevashandi
• Kunetsana kwebhizinesi - nl
4. Nei Law & More?
• Iwe unovimbiswa zvemhando, zvese zviri zviviri mumunda wepamutemo sepakati pekuita musangano.
• Pamwe pamwe neyako Law & More murevereri iwe unofanirwa kukurukura zvese zvikamu uye nhoroondo yekumashure yekupokana kutanga. Mushure meizvozvo iwe utaura nezve kutaudzana mazano kuti uwane mhinduro.
• Wako Law & More murevereri anotungamira kubvunzana, anovimbisa rubatsiro rwepamutemo uye rwemanzwiro uye anotora hanya nezvezvinofarira mapato ese panguva yekutaurirana.
• Munguva yose yekutaurirana kutarisisa kuchabhadharwa kune yako nyaya, manzwiro uye zvaunofarira.
• Pakupera kwekutaurirana kuita kwako Law & More Murevereri achave nechokwadi chekuti zvibvumirano zvese zvakaitwa pakati pako nemumwe wacho zvichatarisirwa pasi muchibvumirano chakanyoreswa chekugadzirisa.